CPF - Koontadayda Tababarka - Ku maalgeli tababarkaaga xirfadeed
Maalgelinta koorsada tababarka ee CPF (MonCompteFormation) way sahlanaan doontaa tan tababar gebi ahaanba bilaash ah Raadi sida loo diiwaan geliyo tababarka oo aad u hesho maalgelin, laakiin sidoo kale:
Xadka ugu badan ee aad xaq u leedahay.
Intee in le'eg ayaad ilaalinaysaa xuquuqdaada.
Sidee xuquuqdaadu tahay xisaabiyey soona saaray.
Sida loo diiwaan geliyo loona isticmaalo xuquuqdaada si sharci ah.
Sida loo sameeyo maalgelinta CPF pole shaqo.
Gaaban oo hufan, waxaad ogaan doontaa sida saxda ah ee loo maalgeliyo tababarka aad jeceshahay. Qof kasta oo shaqeeya ama shaqeeyey wuxuu xaq u leeyahay miisaaniyad tababar oo ah si toos ah ugu ammaano koontadayda tababarka barta, taas oo ah qorshe dowladeed. Waxaad halkaas ka heli doontaa tababarka ugu tayada wanaagsan. Haddii aad horay u shaqeysay, markaa ...
CPF - Koontadayda Tababbarka - Ku maalgeli tababarkaaga xirfadeed July 10th, 2021Tranquillus
READ Xannibaadda Bilaashka ah iyo Tababarka Seeraar (Bilow)
horeWarbixin: Dhisidda Buug-gacmeedka Buug-gacmeedka
socdaHeshiisyada wadajirka ah: suurta gal ma tahay in la bixiyo magdhaw joojin ka duwan oo ku xiran sababta joojinta?